Krizy Nokleary sy Aloky ny Ady Tao Amin’ny Tontolon’ny Blaogy Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2017 7:15 GMT
Iraniana maro mpitoraka blaogy, ao amin'ny firenena sy any ivelany, no nanoratra momba ny krizy nokleary ao amin'ny fireneny ary ilay hoavy maizina izay miandry azy. Ho an'ny maro, toa miha-ratsy no fijerin'izy ireo ny toe-javatra ary mamindra amin'ny làlana tsy izy ny fanjakana.
Ho an'i Alpar, mpitoraka blaogy tena mavitrika ao Tehran, iray amin'ireo ratsy indrindra ao anatin'ny tantaran'i Iràna ity toe-javatra ity [Fa]. Hoy izy:
Ao anatin'ny iray amin'ireo krizy ratsy indrindra teo amin'ny tantarany i Iràna ary tsy misy mahafantatra aorian'ny iainana izany krizy izany, raha mbola hisy Iràna na tsia. Miaraka amin'ity rafitra politika tsy misy ilàna azy ity, fanjakana tsy mahomby, toekarena marefo, renivohitra very, ary izao tontolo izao mitambatra manohitra antsika..mety misy toe-javatra ratsiratsy kokoa noho izany azo eritreretina ve?Tokony hanaiky ny fanapahankevitry ny Firenena Mikambana i Iràna ary hanatsahatra ny fitrandrahana oraniôma voasesika.
Mba faharaharatsiny, ny ady eritreretina
Milaza i Majid Zohari, mpitoraka blaogy mipetraka ao Kanada, hoe imbetsaka isika no naheno olona nilaza fa tsy mitovy amin'i Iràka sy Afghanistan i Iràna ary tsy ho sahy ny hanafika izany ry zareo [Fa]. Milaza ilay blaogera fa tsy mifototra amin'ny lalantsaina mitombina ary tena toherin'ny tantara ny tohankevitra toy izany. Manontany izy hoe iza no afaka miaiky fa tsy tohina tamin'ny zava-nitranga nandritra ny dimy na enin-taona lasa izy. ”Hitantsika tao anatin'ireo taona ireo fa aotra ny sandan'ny faminaniana. Tena manan-danja tokoa ny fanafihana na nokleary na tsia ka farafaharatsiny tokoa mba mieritreritra momba azy ireny isika,” hoy izy manampy.
Zon'olombelona sy Krizy Nokleary
Milaza i Mohammad Ali Abtahi, reformista mpanao politika sady mpitoraka blaogy, fa nanambara i Atoa Elham, Mpitondra-tenin'ny Parlemanta Iraniana, hoe fialantsiny mba hametrahana sazy ho an'Iràna fotsiny ny olana nokleary [Fa]. Araka ny filazany, raha toa ka voavaha ity olana ity dia ho atsangana ny fanontaniana momba ny zon'olombelona. Manohitra ny fomba fisainana toy izany i Abtahi ary milaza fa ny olana nokleary irery ihany no zavatra mampikambana izao tontolo izao hanohitra an'Iràna. Lazain'ilay blaogera fa mbola ratsy lavitra noho ny ao Iràna ny firaketana momba ny zon'olombelona any amin'ny firenena maro.
Mihantsy ny lahatsoratra nosoratan'i Abthai mikasika ny olana zon'olombelona i Jomhour, blaogera monina ao Iràna. Milaza i Jomhour fa ny hany zavatra very ao amin'ny lahatsoratr'i Atoa Abtahi dia ny toe-draharaha mikasika ny zon'olombelona ao Iràna [Fa]. Manoratra izy:
Matetika voahitsakitsaka ny zon'olombelona ato amin'ny firenena ary ny ankamaroan'ny fotoana dia amin'ny fomba ara-dalàna sy fomba voarindra tsara. Ny zon'ny vehivavy, ny finoana ary ireo foko vitsy an'isa dia voahitsaky ny lalàna. Ny sasany mino fa fialantsiny tsara ho an'ny fanjakana Iraniana mba hanohizana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao amin'ny firenena ny olana nokleary, amin'ny anaran'ny fiarovam-pirenena.
Mino i Ardeshi Dolat fa ho voatafika amin'ny hoavy tsy ho ela ny foto-drafitrasa nokleary Iraniana [Fa]. Manoratra ilay bilaogera:
Tsy misy isalasalana fa ato anatin'ny hoavy tsy ho ela, hamafy daroka baomba ny foto-drafitrasa nokleary ireo firenena mahatsiaro ho tandindonin-doza mivantana avy amin'ny Repoblika Islamika. Mazava be ny anton'ny fihetsika toa izany…Etazonia, Israely ary Eoropa dia voarahona hetsika fampihorohoroana mivantana. Tsy manohitra ny angovo nokleary i Etazonia sy Eoropa fa ny fitaovampiadiana eny am-pelatanan'ny Repoblika Islamika.